Jwxo-shiil, Xagee Buu ku Dambeeyey Muxuuse ku Hawlan Yahay? – Rasaasa News
Jan 30, 2010 Eritrea, Jwxo-shiil, ONLF
Dambiile Jwxo-shiil, waxaa uu soo xidhay dhaqdhaqaaqii halgan ee ay horseedka ka ahayd Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], maxayse ahayd ujeedada ka dambaysa arintan?
Jwxo-shiil, oo hore u ahaa Janan ka tirsanaa ciidamdii Jamhuuriyadii Somaliya, ayaa ah nin u dhashay gabalka Ogaden, waxaana uu uga tagay sida la sheegay Ogadeeniya colaad sokeeye isaga oo yar oo reer miyi ah.
Xiligaas wixii ka dambeeyey Jwxo-shiil, waxaa uu noqday nin ka tirsan Jamhuuriyada Somaliya, xidhiidh dambe iyo wax qabad midna lama uusan yeelan dadka iyo dalka Somalida Ogadeeniya.
Amarka Eebe Jwxo-shiil, waxaa uu kaga biiray taageerada ururka ONLF London, mudo ka dibna waxaa uu noqday ninka hogaamiya ONLF. Jwxo-shiil, kolkii uu qabtay hogaanka ururka ayaa waxaa uu bilaabay qabyaalad ah isaga oo yidhi “hal reer ayaa ururka haysta ee ha la isku daro beelaha” eraygan oo aan hore looga maqal xubnaha ururka.
Jwxo-shiil, waxaa uu bilaabay aargoosi dakaneyaal hore uu u tirsanayey oo ay ugu horeeyaan Aamusane iyo walaalkiis. Aamusane oo ahaa xubin wslf, Jwxo-shiil waxaa uu qiyaasayaa in ay Abraahiin dileen, waana mida keentay in uu hal maalin laayo 5 ugaas Abraahiin ah . Waxaa kale oo uu aarsi ugu dhaqaaqay reer Dalal guuleed oo uu ku tirsanayey walaalkii, waxaana ka dambeeyey in uu xabsi u abaabulo Ibraahin Xaad oo ilaa iyo maanta ku jira uubtuu u qoday.
Jwxo-shiil, maanta ururkii uu ka weeciyey wadada halganka ee u adeegsan jiray waxyeelada ummada Somalida Ogadeeniya iyo ku dabagalka dakane aan jirin, waa la fahmay waana lagu kala tagay, waxaana uu fadhiyaa Eritrea maxaadse is leedihiin wuu ku jiraa?
Jwxo-shiil, cirka iyo dhulka ayaa ku yaraaday cidhiidhina waa uu ku jiraa, waxaa afkiisa laga yeedhsiiyey reer Cabdile ayaa i dilaaya, arinkaas oo uu ugu andacooday xukuumada argagisada ah ee Eritrea. Eritrea waxay aad ula yaabtay ciidamadii faraha badnaa ee ay tababartay waxa kala kaxeeyey, waxayna taabatay runta ah in Jwxo-shiil uusan ahayn nin halgan u danaynaya, ka dib dilkii Dr. Dolal.
Hadaba, Eritirea ma doonayso in ay joojiso dabka ay ku shidayso Ethiopia, gaar ahaan ummada Somalida Ogadeeniya sidaas daraadeed Eritrea iyo Jwxo-shiil waxaa dhexmaray heshiis cusub, kaas oo ah in uu abaabulo beeshiisa Haruun, Eritreana ay siiso qalab isgaadhsiin, dabadeedna ragaasi ay ciidameeyaan geeljire aan waxba la socon. Geeljiraha waxaa la siindoonaa sarwaalo barobaro leh sawirona waa laga qaadi kolkaas ayaa la tusi oo loo sheegi in ay N/hurayaal yihiin. Geel jiraha ayaa khaatubilaahi ka taagan ilaalinta geela nolol kale oo ay ku badashaana ma hayaan, waxaana dhab ah in hadii aan laga hortagin qorshaha Jwxo-shiil iyo Eritrea in dhibaato badan ay gaadhiindoonaa beelaha kale. Waxa arintan uu u samaynayo Jwxo-shiil, waa kaliya beelo ku waxyeelee, kamana ah halgan wax u tar.
Ciidamadan beeshiisa ah ee uu ku aruurinayo Eritrea, ayaa iyaga laftigooda uu ka dhaadhicinayaa waa in aynu difaacno beesheena, qabsanaana dhul daaqsinta ku fiican maanta ayaan heli karaaye. Waa arintaas sababta uu Eritrea u joogo, waxaa uu isugu yeedhay waa dhawayd kooxdiisa in ay yimaadaan Eritrea, mana jiraan wax dhag jalaq u siiyey. Isaga suurto gal uma aha in uu si sahal ah kaga tago Eritrea sababtuna waa xabsi guri baasaboorkana waxaa ka haysta socdaalka Eritrea.
Sidaas daraadeed hawsha uu haatan hayo ayaa ah in 30 wiil oo beeshiisa ah oo Thurayal ku haysyta gabalada Nogob in ay u abaabulaan geeljiraha gabalada Nogbeed, si loogu waxyeeleeyo oo kaliya beelaha neceb waxa uu sameeyey Jwxo-shiil.
Ogaden: Ceel Laga Sahminayey Batrol Gabalka Ogaden oo Gale Noqday